Dadka Chad oo madaxweyne dooranaya - BBC News Somali
Dadka Chad oo madaxweyne dooranaya
Image caption Madaxweyne Idriss Deby ayaa markii 5-aad u tartamaya hogaaminta dalkiisa.
Dalka Chad, malaayiin codbixiyayaal ah ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweyne.
Madaxweynaha xilka haya, Idriss Deby, oo jagada u tartamaya markii 5-aad, isla markaana xilka hayay 25 sano, ayaa ka mid ah 14 musharrax oo u tartamaya madaxtinimada dalkaasi.
Ololaha doorashada oo dhammaaday Jimcihii lasoo dhaafay, ayaa waxaa hareeyay dibadbaxyo iyo xarig loo geystay hogaamiyayaal ka tirsan bulshada rayidka ah, kuwaasi oo madaxweyne Deby ugu baaqayay inuu ka haro tartanka.
Waxaa xabsiga la dhigay afar ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada rayidka ah, kuwaasi oo kiiskooda la qaadi doonaa 14-ka bishan April, walow uu dacwad oogga Chad dalbaday in la xiro lix bilood ayaga oo loo haysto in ay waxyeeleeyeen kala dambeynt bulshada.
Musharraxiinta la tartameysa madaxweyne Deby ayaa waxaa ugu cadcad Saalax Kebzabo, oo jagadaasi u tartamaya markii 3-aad.
Wuxuu dhowr jeer xubin ka noqday golihii wasiiradda ee madaxweyne Deby sanadihii u dhexeeyay 1993 ilaa 2001.
Dhowr hay’adood ayaa cambaareeyay tacaddiyo xuquuqda aadanaha ah oo ka dhacay Chad, balse madaxweyne Idriss Deby ayaa ah saaxiib weyn oo ay leeyihiin dalalka Galbeedka, isla markaana gacan ka siiya dagaalk ka dhanka ah argagixisada ee gobolka Saaxil.